ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့်အကြီးအကျယ်တာ ၀ န်ယူသောမော်တာကြိတ်စက်ဖြတ်စက်
Hammer Mill Chaff Cutter သည် Chaff Cutter နှင့် Hammer ကြိတ်စက်တစ်ခုရှိသည်,အရာကျယ်ပြန့်လယ်ယာအတွက်အသုံးပြုသည်,သစ်သားနှင့်အစာကျွေးစက်ရုံ, etc.The chaff cutter စက်အတွက်ကုန်ကြမ်းမြက်စီးရီးနိုင်ပါတယ် ,ကောက်ရိုး ,တိရိစ္ဆာန်အစာနှင့်ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ရန်သင့်လျော်သောအညှာ etc.. တူကြိတ်စက်အတွက်ကုန်ကြမ်းများသည်စပါးမျိုးဖြစ်နိုင်သည်, ပြောင်းဖူး,ဂျုံ ,ဆန် ,millet စသည်တို့. နောက်ဆုံးကြိတ်ခွဲထားသောအမှုန့်သည် ၀.၈ မှ ၈ မီလီမီတာရှိနိုင်သည်။ ဖန်သားပြင်ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ကြိတ်ခွဲထားသောပစ္စည်းအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရနိုင်သည်။ စက်ကိုဒီဇယ်အင်ဂျင်နှင့်လျှပ်စစ်မော်တာဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည်။,သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီဓာတ်ဆီအင်ဂျင်သည်သင့်စွမ်းအင်နှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်.
လယ်သမားများ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်, မွေးမြူရေးသည်အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်. ယခုခေတ်တွင်မြက်များနှင့်အစာလုံလောက်စွာရရှိရန်ခက်ခဲသည်. ထို့ကြောင့်မြက်နို့နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၏အညစ်အကြေးကိုလျှော့ချရန်အပင်ဖြတ်စက်ကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်, အရာသေးငယ်တဲ့အပိုင်းပိုင်းဖို့မြက်ပင်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်. ဤသည်ကြောင့်ကျွဲနွားများသည်မြက်ပင်များအားလုံးကိုစားသုံးစေခြင်းကြောင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ ချတ်ဖြတ်စက်သည်စက်ကိရိယာဖြစ်ပြီးကောက်ရိုးသို့မဟုတ်မြက်ပင်ကိုအသေးအဖွဲများအဖြစ်ဖြတ်တောက်။ အတူတကွရောစပ်။ ကျွဲနွားများအားကျွေးသည်။. ၎င်းသည်တိရိစ္ဆာန်အစာကြေခြင်းကိုတိုးတက်စေသည်. ထို့ကြောင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်စက်လည်ပတ်ရန်လိုအပ်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားထုတ်မှုကိုလျှော့ချရန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်စက်များပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့်နို့ထွက်လယ်သမားများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. လတ်တလောတွင် chaff cutter စက်သည်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကဲ့သို့သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုမောင်းနှင်သည်.
အစာကျွေးခြင်းအပြောင်းအလဲနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အချို့သောအပြောင်းအလဲနဲ့လိုအပ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများရှိနိုင်ပါသည်. ဤရွေ့ကားအစာပါဝင်ပစ္စည်းများကြမ်းသီးနှံအစေ့များပါဝင်သည်, ပါဝင်မှု၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်အာဟာရတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်စေသည့်အမှုန်အရွယ်အစားလျှော့ချရေးလိုအပ်သည့်ပြောင်းဖူး. ဒီအမှုန်အရွယ်အစားလျှော့ချရေးအောင်မြင်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်,ကြိတ်ခွဲစက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သံမဏိကြိတ်စက်သည်အမှုန်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးဖြိုခွဲနိုင်သောပစ္စည်းများနှင့်ဖိုင်ဘာအသုံးပြုမှုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။, အနည်းဆုံးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်သည်,သံတူစက်ကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်သောအမှုန်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အလင်းဆုံလိမ့်မည်, polisher ပုံပေါ်တဲ့မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ.
1.ဘက်စုံသုံးစက် - စက်ကိုစိမ်းလန်းသောအစာကျွေးခြင်းနှင့်စပါးကြိတ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်.
2.အသစ်သောဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းပညာ - ဤနယ်ပယ်ရှိသုတေသနလုပ်ငန်းကိုလေ့လာခဲ့ပြီးလိုချင်သောရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်နည်းစနစ်အသစ်များကိုတီထွင်ခဲ့သည်.
3.ဘေးကင်းရေး- အမြင့်ဆုံး ဦး စားပေးမှုကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုပေးသည်. ၎င်းကိုတောင်သူလယ်သမားများနှင့်သူ့မိသားစုကကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသောကြောင့်လွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောအစောင့်ရှိသည်.
4.အစားအစာပစ္စည်းအစာကျွေး – ကျနော်တို့ Hopper မှတဆင့်အစာကျွေးကျွေးမွေး၏။ ကျွေးမွေးကျင်းကြီးမားသောအဖွင့်ရှိပါတယ် & မြင့်မားသောအရှည်ကဒီမြက်မှလမ်းညွှန်လမ်းပေးသည် & ခြောက်သွေ့သောပြောင်းဖူးကောက်ရိုးကဲ့သို့အခြားအစာကျွေးပစ္စည်း, မြက်ပင်, ပဲမျိုးစုံ, ဂျုံအညှာ,အစာကျွေးခြင်းထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးပွားစေပါသည်.
5.အထွက်ပြွန်မှအစာကျွေးခြင်း - ဓါးသွားလှည့်ပြီးနောက်, မြက်ခြောက်သွေ့သောကောက်ရိုးကဲ့သို့အစာကျွေးသောပစ္စည်းများကိုအမှုန့်ပုံစံအဖြစ်သို့ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။, အစာကျွေးဖို့ကွန်တိန်နာထားပါ.
7.ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ - ဒီဇိုင်းကြောင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကြောင့်စက်ကိုသေးငယ်သည့်နေရာတွင်တပ်ဆင်စေသည်.
8.မတူညီသောပါဝါရွေးချယ်မှု - သံတူစက်စက်ကိုဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည် ,ဓာတ်ဆီအင်ဂျင် ,လျှပ်စစ်မော်တာ.